अत्तर "रातो स्याउ" ( "नीना Ricci"): को स्वाद र समीक्षा विवरण
को बीसौँ शताब्दीको प्रारम्भिक thirties मा PARISIENNE के थियो? Emancipated र Eccentric, अपमानजनक र uninhibited। डिजाइनर womenswear नीना Ricci एकदम विपरीत मा राखे। त्यो जो राम्रो स्त्रीत्व अनुग्रह र आधुनिक सुविधाहरु संग संयुक्त कपडे, सी थाले। यसलाई आफ्नो ग्राहक अनुमानित। पेरिस फेसन घर Niny Richchi मा 1932 मा स्थापित 1945 मा विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त। परिष्कृत र शिष्ट वस्त्र पुरानो विश्व मा रूपमा महिला मूल्यवान, र सागर को अन्य पक्षमा। तर Niny Richchi l'एयर डु Temps ( «समय वातावरण") कुनै द्वारा जारी द्वारा पहिलो अत्तर फैशन घर को संस्थापक र उनको छोरा रबर्ट हो। त्यसपछि पेरिस ( «पेरिस प्रेम»), प्रिमियर Jour ( «पहिलो दिन") र यस्तो प्रेम रूपमा कस्मेटिक्स, को दुनिया हल्लाइन्छ गरेको अन्य स्वाद थिए Ricci Ricci। तर यस लेखमा यी आत्माहरू बारेमा छैन, र वस्त्र मा भन्दा पनि अधिक त। को अत्तर "नीना Ricci" ( "रातो स्याउ") - हाम्रो ध्यान केन्द्र मा।
किन दुई नाम
यो अत्तर फैशन घर को संस्थापक को स्मृति perpetuate गर्न सिर्जना गरिएको थियो। आत्माहरूलाई को आधिकारिक नाम - नीना नीना Ricci द्वारा। "रातो स्याउ" - तर तीन चाँदी पात एक बोतल फिलर स्वर्ग फल को रूप मा चिन्न मानिसहरूलाई अर्को नाम वृद्धि दिनुभयो। "नीना Ricci" - उत्कृष्ट प्रयोग एक ब्रान्ड मार्केटिङ चाल। को उपखाडी को रातो स्याउ को रूप मा अत्तर जारी, लक्षित दर्शक फालिएको जस्तै ब्रान्ड प्रतिज्ञा को निर्माताहरू: "यो अत्तर हव्वालाई लागि स्वर्ग बाँकी छन्।" र पनि (ग्रीक पौराणिक कथाहरु को connoisseurs का लागि): "यो अत्तर पेरिस मात्र सबैभन्दा सुन्दर देवी संसारमा प्रस्तुत - Aphrodite।" उत्पादन आवश्यकता छैन थप विज्ञापन मा, छैन यो छ? खैर, इत्र मा स्याउ खुशबू वर्तमान, तर मूख्य छैन। को भनाइ जान्छ रूपमा समीक्षा "भायलिन" एक सिट्रस पुष्प गंध रोमाञ्चक खेल्छन्। किन, धेरै महिला लागि यो सुगन्ध नयाँ वर्ष संग सम्बन्धित छ सायद छ।
नीना देखि नीना Ricci अत्तर को इतिहास
को टाढा 1987 मा जन्म गन्ध। विशेष विज्ञापन अभियान छैन सञ्चालन गरिएको थियो, तर खरीदार र कुनै पदोन्नति गर्न गुणस्तर उत्पादन संग प्रेम गरे। अत्तर "नीना Ricci" ( "रातो स्याउ") आफूलाई अकस्मात शीर्ष अन्त इस्पात निर्माताहरु। तसर्थ, एउटै नाम को क्लासिक स्वाद को एउटा अद्यावधिक संस्करण 2006 मा स्थापित भएको थियो। आफ्नो "आमाबाबुले" आफ्नो शिल्प को मालिकको, प्रसिद्ध perfumers Olivier Polzh र Zhak Kavale भएका छन्। यो समयमा एउटा विज्ञापन अभियान गरियो। तर यो सफलतापूर्वक अत्तर गर्न आवश्यक छ। प्रेमको अद्भुत, शानदार स्वाद - सार्वजनिक लामो यो जस्तै केहि को उपस्थिति को लागि तीव्र इच्छा छ। यो जो तत्काल खुसी सपना को संसारमा तपाईं लिन्छ एक मिठाई स्वाद, एक साँचो रहस्यवादी Elixir छ। उत्पादन निर्माताहरू सुगंध भीड देखि यसको मालिक distinguishes जब लाइन पक्रेको छ, तर अरूलाई मा लगाएको छैन। र, हरेक महिला आफ्नै तरिकामा "बसिरहेका" को लागि अत्तर मा समीक्षा, व्यक्तिगत गुण emphasizing अनुसार।
2006 मा, चमकदार पत्रिका र "नीना" को आत्माको बारेमा टेलिभिजनमा विज्ञापन धन्यवाद सबै सिके। दिइएको टुक्रा प्रतिज्ञालाई के हो? एउटा सुन्दर पोशाक मा Pyshnovolosaya केटी, उनको एक परी कथा एक राजकुमारी जस्तै हेर्न बनाउने, को coveted स्याउ लागि रूख मा हार्ड चढती। irresistible को प्रलोभन संग सम्बन्धित सबै मान्छे को यो फल। यसलाई "उत्पत्ति" बाट र एक फरक तरिका मा एक खण्ड व्याख्या गर्न सम्भव छ। आदमलाई स्याउ संग हव्वाले प्रमोदवनमा सबै सुख भन्दा बढी मनमोहक थियो। छोटो मा, विज्ञापन काम, एकदम यसलाई अनुरूप छ कि थप स्वाद। सबै "रातो स्याउ" प्रेम, "नीना Ricci" फेरि एक लोकप्रिय ब्रान्ड भएको छ। आखिर, हरेक महिला प्रिय मानिस सबै जानेछन् जसको लागि भनेर हव्वालाई बन्न चाहन्छ। स्वर्ग बाट banished भइरहेको मुखको जोखिम बावजुद र। हो, र गंध समीक्षा आश्वासन, प्रेम पर्नु। उनको विशेष, रहस्यमय ऊर्जा चार्ज, सकारात्मक भएको भालू सम्मानित गरिएको छ।
रातो स्याउ र अन्य
पाप संसारमा-प्रसिद्ध अत्तर "रातो स्याउ" को फाइदा लिन सकेन। "नीना Ricci" (फैशन घर) अन्य नयाँ विज्ञप्ति, "स्याउ" पछि एक। क्षणमा त्यहाँ नौ flankers खुशबू, एक पौराणिक कथा भएको छ जो छन्। यो "नीना गोल्ड Edishn" (सुनको बोतल), 'प्रेम खाडी नीना "(हरियो स्याउ)," Le प्याराडाइज डी नीना "(बैजनी पीला)," नीना एल Elixir "(रातो र सेतो)," सुन्दर नीना "( उज्ज्वल गुलाबी)। 2011 देखि, घर सेतो "फल" को उत्पादन गर्न थाले। यो "नीना हिम राजकुमारी" (मैट), "नीना काल्पनिक" (रंग मुद्रण संग) र "KUL नीना एल Eau"। पछिल्लो Flanker 2014 मा एक नवीनता छ - "ला डी नीना Tenteyshen" (उपयुक्त शीशी मा ऐंसेलु स्वाद)। तर त्यहाँ पनि सीमित संस्करण हो! उदाहरणका लागि, "नीना Prishez Swarovski Edishn", रातो कञ्चनपानी बोतल र यस वर्ष नयाँ मा "राजकुमारी नीना d'संयुक्त राष्ट्र ज्हु", "नीना Edishn d'अथवा" र "Le स्वादिष्ट डी नीना।" खैर, सबै flankers perfumer Olivier Cresp द्वारा बनाइयो।
को स्वाद को हुनुहुन्छ
रातो - - "स्याउ" तर पछि विभिन्नता को कुनै पनि धेरै पहिलो जित्यो जो कि महिमा, पायो छैन। "नीना Ricci" पनि लाड प्यार ग्राहकहरु लागि सीमित संस्करणहरु मा, आफ्नो सिर्जना पार गर्न सक्षम थियो। साँच्चै, अत्तर यो महत्त्वपूर्ण क्रिस्टल र सुगन्ध Swarovski छैन। क्लासिक को सफलता को रहस्य के छ "नीना?" आत्माको छैनन् सपना र जीवनमा आफ्नो सपना महसुस डर जो जवान बालिका, उद्देश्य थिए। तिनीहरूले एक महिला भरोसा दिन, आफ्नो क्षमता पुग्न र हिम्मत गर्न बनाउन। र आत्माको आफ्नो लक्ष्य दर्शक परे गएका छन् किनभने। को भनाइ समीक्षा जान्छ रूपमा, अत्तर मात्र जवान बालिका छ। परिपक्व महिलाहरु पनि द्वारा जान्छ। मुख्य कुरा हो - राम्रो मुडमा। त्यसपछि युवा, Aphrodite हव्वाले आकर्षण र seductiveness को स्पार्क आफूलाई द्वारा आउनेछ।
"नीना Ricci" ( "रातो स्याउ"): को स्वाद निर्माताहरु को विवरण
यो जादुई संरचना, प्रलोभन र चमत्कार को प्रतिज्ञा को शक्ति endowed। त्यो, रसदार ताजा र अलिकति अमिलो टिप्पणीहरू थियो प्रकट गर्नुभयो। त्यसैले मधुर, तरल, रातो स्याउ को तीव्रता softens जो Calabrian कागति र कागती, ध्वनि। समय, हृदय टिप्पणीहरू प्रकट गर्न थाल्छन्। मञ्चमा peony र वेनिला ताजा तेज कर्ड को नाजुक पत्रदल छन् चन्द्र फूल। आत्माको "नीना Ricci" ( "रातो स्याउ") लामो पाश कम्पन छ। त्यहाँ कपास musk, भर्जिनिया देवदार र सेतो ताजा sawn र काठ स्याउ को aromas देखिन्छन्। आधार टिप्पणीहरू यस सेट संग छाला लामो रहनुहोस्। रूपमा खुशबू disclosed? सुरुमा, यो हँसिलो जवान सिट्रस ताजा छ ताजा। त्यसपछि क्रिसमस मिठाई को न्यानो सङ्केत - क्यान्डी स्याउ, pralines ... अनि अन्तमा, आफ्नो रहस्यमय र languid आधारभूत ध्वनि गर्न परम आनन्द ल्याउँछ।
"नीना Ricci" ( "रातो स्याउ"): उपभोक्ता को विवरण
तर भावना छैन व्यावसायिक, तर पनि बालिका र महिला धेरै संवेदनशील noses छ? पिरामिड को समीक्षा Smells Ricci देखि "नीना" आत्माको उत्पादकहरु विवरण धेरै फरक छैन। एक ताजा सिट्रस स्वाद - केही शीर्ष टिप्पणी मा स्याउ महसुस छैन। तथापि, यसको सट्टा Calabrian सुन्तला र कागती केही fancies तीतो अंगुर दाख को। के उपभोक्ताहरु हृदय अत्तर "नीना Ricci" ( "रातो स्याउ") को टिप्पणी सुन्न? स्वाद विवरण समीक्षा शब्दहरू प्रतीक र संगतले चिनारी। र सबैको ओठ: "नयाँ वर्ष" संघ बुझ्ने छ। सिट्रस स्वाद लुप्त होती को पृष्ठभूमि विरुद्ध स्पष्ट सुखा दालचिनी स्याउ र फिटेको र चकलेट को गन्ध उभर। आभा छुट्टी मात्र आधार मा वुडी टिप्पणीहरू जोड। सर्कल उपहार, फूल, बाहिर हिउँ र चिसो र कोठा र न्यानो पनि शवर ... अनि आनन्द रिङ्गटा: यो तपाईं बलिरहेको चिमनी मा नयाँ वर्ष पूरा देखिन्छ।
छैन लोकप्रियता को स्वाद मा कम्तिमा भूमिका एक शानदार र मूल बोतल प्ले। Eau डे "नीना Ricci" ( "रातो स्याउ") स्वर्ग को पाकेको फल को रूप मा एक कन्टेनर मा हालिएको छ। दुई सँगै र एक, सानो, अलग - माथिबाट, टोपी देखि, यो तीन चाँदी पात घेरिएको छ। बोतल frosted ग्लास उज्ज्वल रातो रंग बनेको छ। उपहार सेटमा विशेष गरी सुन्दर बोतल। दुई साना "स्याउ" बस क्रिसमस ट्री तिनीहरूलाई रचनाहरू चाहन्थे कि नयाँ वर्षको खिलौने त यस्तै। बिक्री को लागि पचास यूरो को एक सेट - औसत मूल्य कर्तव्य-मुक्त पसलहरूमा छ। 50 एमएल र 80 को एक शीशी एक ribbed ढाँचा संग गत्ता बक्से मा पैक छन्। को "रातो स्याउ" एक सय milliliters को कुनै राशि, छैन बारे अन्य रंग को Flanker "नीना" भन्नुभयो गर्न सकिन्छ भनेर याद गर्नुहोस्।
एक नक्कली कसरी भेद गर्न?
यो प्रश्न शौचालय, पानी "नीना Ricci" ( "रातो स्याउ") किन्न चाहने धेरै महिला खडा छ। फोटो अत्तर छैन, दुर्भाग्य, डिजाइन सबै subtleties व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त हामी तपाईंलाई देखाउने छौँ कसरी counterfeits देखि मूल बताउन। पहिलो, बक्स। यसलाई स्पष्ट देखिने पसली वाला ढाँचा हुनुपर्छ। प्याकेज पछाडि पक्षमा एक ब्याच नम्बर हो। निस्सन्देह, कोड को उत्पादन देश पूरा गर्नै पर्छ - फ्रान्स। तपाईं बोतल हेर्न भने स्याउ बनाइएको नक्कली ग्लास थप, ट्यूब भित्र छैन देखिने छ भनेर संतृप्त रंग। तर मूल मा अस्वीकार्य छ जो वसन्त र जालसाजी देखिने atomizer, मा। यी आत्माहरू मा डिजाइन को सबै साना विवरण उच्च गुणवत्ता गरिएका छन्। टोपी दृढ विराजमान छ। पनि रचनाहरू थिएन बाहिर छोड्छ। औसत मा, एक लेखिएको «नीना Ricci» देखिने छ। र अन्तमा, मूल्य र खरिद ठाउँमा। उसोभए, तपाईं दुर्गन्ध को मूल्य मा गुणवत्ता अत्तर किन्न सक्दैन। 50 एमएल र 30 को 1,700 एमएल - औसत मूल्य शौचालय पानी को लागि प्रति 2500 को 80 milliliters तीन हजार rubles छ।
आत्माको फिट गर्न
आँखा बंद तथ्यलाई बारेमा निर्माता वचन भर छैन भनेर मात्र सिर्जना जवान र काल्पनिक बालिका लागि ( "रातो स्याउ") Eau डे "नीना Ricci"। समीक्षा उत्तिकै सुगंध युवा र परिपक्व रूपमा मानिन्छ। पिरामिड musk र देवदार बनाउन अत्तर गहिरो, रोमाञ्चक समावेश। एक बल्लतल्ल माथि को सुगन्ध रोजिएको caramelized स्याउ, चूल्हा को न्यानोपन संग सहमतिलाई कारण, कि अत्तर सबै उमेरका लागि उपयुक्त छ त्यसैले त एकल पुरुषहरु ... आकर्षित। यहाँ महत्त्वपूर्ण छ: अत्तर iskrinka आँखा भएका मात्र ती व्यक्तिहरूलाई थकित गर्नुपर्छ। चिसो, चिकना महिला मा, साथै लामो समय को लागि सुस्त, नीरस महिला र बालिका अत्तर मा रूपमा आयोजित गरिनेछ। खुशबू "नीना Ricci" ( "रातो स्याउ") मीठो Smells प्रेमीहरूलाई चयन गरिएको छ। तर, संरचना छैन cloying छ। सिट्रस सुन्दर र कोमल स्याउ मीठो कुरा, Praline र कर्मेल क्रीम को reminiscent संग धुन मा पूर्ण गन्ध। छोटो मा, वेनिला स्वाद को पिरामिड मा अनुमान मात्र।
यो साँच्चै एक सार्वभौमिक महिला अत्तर छ। "नीना Ricci" ( "रातो स्याउ") को समीक्षा कार्यालय मा soiree मा, एक युवा पार्टी, रोमान्टिक मितिमा, काम गर्न जानुअघि प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिए। सुगंध आकस्मिक लुगा, flirty पोशाक, व्यापार सुट लागि उत्तिकै उपयुक्त छ। मौसमको लागि को रूप मा, राय विभाजित छन्। केही आत्माहरूलाई पनि न्यानो महिनामा धेरै उपयोगी हुनेछ भन्ने तर्क। अरूलाई उपयुक्त आरामदायक र मीठो स्वाद slushy शरद ऋतु सांझ र ठण्डा हिउँदमा दिनमा लागू गर्न जिद्दी गर्छन्। विशेष क्रिसमस-नयाँ वर्षको गन्ध - ती समीक्षा कि "नीना" भन्न पनि छन्। कुनै पनि मामला मा, सबै प्रयोगकर्ता मा एक हट दिन, सुगंध बासनाको, छैन लगाएको, बरु ताजा सिट्रस ताजा सहमत हुनुहुन्छ। र शरीर गर्मी द्वारा खुसीले गदगद चिसो, मा, यो एक कोमल मिठास exudes र माथि सान्त्वना को विचार conjures।
अत्तर "नीना Ricci" ( "रातो स्याउ") को समीक्षा आश्चर्यजनक लगातार उल्लेख। उहाँले disclosed धेरै सुन्दर छ। सुरुमा, कागती र lunotsveta, त्यसपछि रसदार स्याउ को गन्ध। वरपरको सेतो musk र देवदार को रोमाञ्चक मोहक निशान लाग्छ। छाला मा दिन को अन्तसम्ममा सिट्रस को उज्यालो खुशबू, नरम कर्मेल छ। बाल मा, समीक्षा, अत्तर पकड आफ्नो टाउको धुन सम्म आश्वासन। लुगा मा - यो धुन छैन। धेरै महिलाहरु मानिसहरूले तिनीहरूलाई ध्यान गर्न सुरु रूपमा पिरामिड, मदहोश, neroli वा अन्य aphrodisiacs प्रयोग गरिन्छ कि लाग्छ। वास्तवमा, अत्तर बस भरोसा दिन र आफ्नो जादू महसुस गर्न हव्वाले सुन्दर छोरी मदत।
को eyebrows को आकार फरक हुन सक्छ, तर सधैं सुन्दर हुनैपर्छ
तरल क्रीम साबुन: कसरी चयन गर्ने?
Hyaluronic एसिड। समीक्षा
कोमल को Embodiment: fringe पोशाक
अपार्टमेंट को सूची मूल्य के हो? तपाईं उनको कसरी थाहा छ?
Aparthotel "ठाडो", सेन्ट पीटर्सबर्ग: होटल समीक्षा, फोटो, सम्पर्क
लगातार रिज फावडा "TekhnoNIKOL" नरम छत लागि: एक अवलोकन, स्थापना र प्रविधिको समीक्षा
कसरी बच्चा छ संभावना वृद्धि गर्न: आईवीएफ लागि तयारी?
ओमेलेट भरने वाला रोल: नुस्खा
कसरी मन आकर्षित गर्न? पेन्सिल!
सनकी फूल dieffenbachia: के गर्न, त्यसैले तिनीहरू देखा?